Umzobo we-Europa League: IManchester United yanikwa iqela elinzima | 1xbet
UNuno Espírito Santo uzokonwaba kuno-Unai Emery ngokuzoba, kubadlali beArsenal abakwiqela A kubandakanya u-Eintracht Frankfurt no-Standard Liège, ngelixa iManchester United ijongene nohambo olunyanzelisa ukuya ePartizan Belgrade nase-Astana yaseKazakhstan. I-Eintracht ifikelele kumdlalo owandulela owamanqam we-Europa League kwisizini ephelileyo, yaphulukana neChelsea, nangona sele behlukene nabadlali babo ababalaseleyo eLuka Jovic naseSébastien Haller, abathengiselwe iReal Madrid neWest Ham ngokwahlukeneyo. Isikhokelo seqela: uqikelelo kunye nabadlali beenkwenkwezi Funda ngakumbi
Kumaqela aseBritane kumzobo amacala aseScotland angaphantsi azifumana eneenkqubo zokuvavanya.ICeltic ikwiQela E elinomtsalane kunye noLazio, Rennes kunye noCluj, ngelixa iRanger iyakuba novavanyo olunzima ekuphumeni kwiqela elinoPorto, Feyenoord kunye naBaselula aSwitzerland.
IArsenal yaya yonke indlela kwisizini ephelileyo, ukubethwa ngo-4-1 eBaku yiChelsea.Umdlalo wamanqam we-2020 uza kubanjelwa eGdansk, ePoland, ayilo themba licel’umngeni kumaqela nakwabaxhasi beli lizwe, nangona ngohambo olunzima kweli nqanaba lamaqela eManchester United bazobe umququ omfutshane ngemidlalo eKazakhstan naseSerbia ukongeza kwiAlkmaar yase-Netherlands. p>
Iintshaba zeArsenal ubuncinci zinokufikeleleka ngokufanelekileyo, ngelixa umphathi weWolves wasePortugal eza kuvuya kuhambo oluya eBraga.I-Besiktas inokuba ngumceli mngeni kwiqela elifikelele kwinqanaba leqela ngokuphumelela umdlalo wokugqibela kwiTorino kule veki, nangona iingcuka zizakuqiniseka ngokuthatha amanqaku ngokuchasene nabachasi bayo basePortugal naseSlovakia.
Ngelixa uLazio Isenokuba lelona qela libalaseleyo kwiCeltic kwiqela E, iRennes akufuneki ijongelwe phantsi emva kokuphumelela kwabo kutshanje ngokuchasene neParis Saint-Germain kwiligi yaseFrance, kwaye uNeil Lennon kunye nabadlali bakhe abadingi kwaziswa ngoCluj abadlalayo kule nyanga. Iintshatsheli zaseRomania zankqonkqoza iCeltic kwiChampions League ngokuphumelela i-4-3, emva kokuba iCeltic ibonakale ukuba yenze umsebenzi onzima ngokufumana umzobo we-1-1 kumlenze wasemva.Iqela likaDan Petrescu liye laphulukana noSlavia Prague kumdlalo wokudlala umdlalo weChampions League, yiyo loo nto bebuyelene bejongana nabachasi abaqhelekileyo kwi-Europa League.
kwaye mhlawumbi singaphindezela kwiCluj, ”utshilo umphathi weCeltic. “IRennes neqela elilungileyo, bayiphumelele indebe eFrance kwisizini ephelileyo, kodwa ndicinga ukuba singenza impembelelo entle kwiqela.”
KwiQela G umphathi weRanger, uSteven Gerrard, uzakuba esazi ukuba iintshatsheli zaseSwitzerland, aBafana aBafana, banike iManchester United umdlalo ohloniphekileyo kwiChampions League e-Old Trafford kwisizini ephelileyo, ukuba iPorto ibiyindawo yesibini kwiligi yasePortugal ngelixa uFeyenoord kaJaap Stam ephume isithathu kwi-Eredivisie.